အမေးများသော မေးခွန်းများ – Carsayars
လူကြီးမင်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်ကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် Carsayars မှ ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသော ကားမောင်းသူတစ်ဦးသည် လူကြီးမင်းတို့၏ မော်တော်ယာဉ်တံခါးဝဆီသို့ အရောက်လှမ်းလာခဲ့မှာဖြစ်ပြီး လိုရာခရီးကို မောင်းနှင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Hotline နံပါတ်ဖြစ်သော ၀၉-၉၅၂ ၂၂၂ ၀၀၁ သို့ ခေါ်ဆို၍ ဖြစ်စေ၊ Carsayars Facebook Messenger သို့ ပေးပို့၍ဖြစ်စေ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ Website မှ ဖြစ်စေ ဘွတ်ကင်များကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မကြာမီတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ထောက်မှ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအတွက် ငွေကောက်ခံမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ တိကျသောနှုန်းထားများကို ဖုန်းခေါ်ပြီး အကြံဉာဏ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
နှုန်းထားများ/ စျေးနှုန်းများ ဘယ်လောက်ပါလဲ?
အသေးစိတ်သိရှိပါက Carsayars မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် တိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်ပါသည်။
ငှားရမ်းသည့် အချိန် ထပ်မံတိုးမြှင့်ပါက အပိုထပ်ဆောင်း ပေးရပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ အချိန်သက်တမ်း မည်မျှပင်တိုးမြှင့်သည်ဖြစ်စေ အပိုကြေးကောက်ခံပါမည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက Carsayars မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် တိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်မောင်းသူသည်သင်သတ်မှတ်ထားသောဘွတ်ကင်ပြုလုပ်ချိန်မှမိနစ် ၃၀ သာ သင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ စီးနေကျ ယာဉ်မောင်းများ/ကားမောင်းသမားကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါသလား?
ရနိုင်ပါသည်။ သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ထိုသူကို သင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင်၏ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက် (သို့မဟုတ်) ပြင်ဆင်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ နောက်ဆက်တွဲကိစ္စများကို ဖြေရှင်းရန်၊ အခကြေးငွေများကိုဖယ်ရှားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ hotline နံပါတ် ၀၉-၉၅၂ ၂၂၂ ၀၀၁ ကိုအနည်းဆုံး ၂ နာရီ ကြိုတင်၍ ခေါ်ဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Carsayars မှ စတင် ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့် အချိန်မှသာ ငွေပေးချေခြင်းကို လက်ခံသွားပါမည်။
ယာဉ်မောင်းများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ငှားရမ်းလို့ရမလား?
ရပါသည်။ လူကြီးမင်းသည် ကားမောင်းသူများကိုအချိန်ပို (နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်နှင့်နှစ်စဉ်) ငှားနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ Hotline နံပါတ်ဖြစ်သော ၀၉-၉၅၂ ၂၂၂ ၀၀၁ သို့ ခေါ်ဆို၍ ဖြစ်စေ၊ Carsayars Facebook Messenger သို့ ပေးပို့၍ဖြစ်စေ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ Website တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ခရီးဝေးများအတွက် ယာဉ်မောင်းများကိုငှားရမ်းလို့ရပါသလား?
ရပါသည်။ လူကြီးမင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းခရီးဝေးသွားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယာဉ်မောင်းများကိုငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။
ငှားရမ်းထားသည့် မော်တော်ယာဉ် ဖြစ်တောင်မှ ဝန်ဆောင်မှုကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းခွင့်ရှိပါသလား?
ရပါသည်။ သင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် ကားမှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ ယာဉ်အာမခံနှင့် ကားကုမ္ပဏီ၏ငှားရမ်းမှုကုန်သွယ်ရေးလိုင်စင်စသည့် စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည် ကားအတွင်း၌ရှိရပါမည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများမရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည့် မည်သည့်ဒဏ်ကြေးကိုမဆို သင့်ပေးဆောင်ရလိမ့်မည်။
Carsayars သည် (နံနက် ၉: ၀၀ မှညနေ ၅: ၀၀ နာရီ) ရုံးချိန်အတွင်း ကြိုတင်စာရင်းပေးမှုများကို လက်ခံပါသည်။ သို့သော် မည်သည့်အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက်မဆို အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Carsayars သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ယာဉ်မောင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူ/ ပြည်သားများအတွက် ဆန်းသစ်၊ ထူးခြားသော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
PKBC Building, အမှတ် (၁၂၁),မင်းရဲကျော်စွာလမ်း,ကရင်ခြံရပ်ကွက်,အလုံမြို့နယ်,ရန်ကုန်မြို့